कहिल्यै नदेखेको पतिको नाममा ९० लाख क्षतिपूर्ति ! पत्नी भन्छिन्, 'एक सेकेन्डपनि देख्न पाएको छैन'
ARCHIVE, NEWSPAPER » कहिल्यै नदेखेको पतिको नाममा ९० लाख क्षतिपूर्ति ! पत्नी भन्छिन्, 'एक सेकेन्डपनि देख्न पाएको छैन'
काठमाडौं – एक सेकेन्ड पनि पतिसँगै देखभेट-उठबस नगरी हकदारका रूपमा ९० लाखभन्दा बढी रकम बुझ्दा नन्दनी माली अचम्ममा परेकी छन् । रुपन्देही शुद्दोधन नगरपालिका निवासी उनी कतारको दोहामा ज्यान गुमाएका पति नन्दकुमार पासीको वियोगमा छिन् । उनीहरूको जोडी अभिभावकले बाल्यकालमै जुराइदिएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।